शाहरुख होइन रणवीर 'डन' बन्ने !
प्रकाशित : सोमबार, जेठ २७, २०७६२२:४३
किनकी उनले शाहरुखको पछिल्लो रिलिज फिल्म ‘जिरो’ सँग साउथ इण्डियन फिल्म ‘केजीएफ’ सँगै प्रदर्शनमा ल्याएका थिए । त्यसपछि शाहरुखको सम्बन्ध केहि चिसिएको हो । पछिल्लो समय निर्माता अब नयाँ डनको खोजिमा छन् । नयाँ अनुहार हुने भएपछी यो फाइनल च्याप्टर पनि नहुने भएको छ । भारतीय मिडियामा आएको खबरलाई आधार मान्ने हो भने फिल्ममा डन बन्नको लागि रणवीर कपुरलाई अफर गरिएको छ ।
रणवीर पनि यस अफरमा पोजेटिभ नै छन् । फिल्मलाई फरहान अख्तरले निर्देशन गर्नेछन् । त्यसो त रणवीरलाई डनको पहिलो सिरिजमै फरहानले अफर गरेका थिए । तर , त्यस समयमा उनले डन बन्न स्वीकारेनन् । पछिल्लो समय फिल्म ‘सन्जु’ मार्फत बक्स अफिसमा धमाल मचाएका रणवीरले फरहानसँग काम गर्ने सोच बनाएका छन् । अमिताभ बच्चन हुँदै शाहरुखसम्म आइपुगेको डनको क्यारेक्टरलाई रणवीरले कसरि निर्वाह गर्छन ? यो भने आउँदा दिनले नै बताउनेछ ।
पुलिस बन्दै शाहरुख